နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁၀) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on October 27, 2014 at 12:05 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Bob : Excuse me, is this seat taken?
Larry : No, it isn’t.
Bob : Would you mind moving over one, so my friend and I can sit together?
Larry : No, not at all.
Bob : Thanksalot.
Bob နဲ့ Larry တို့ စကားပြောတဲ့ အကြောင်းကို စိတ်နဲ့ နားထောင် ကြည့်ရအောင်။
Bob က "Would you mind moving over one…" လို့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး တောင်းဆိုတယ်။ "Would you mind…"ဆိုတာ "Are you willing to…"လို့ဆိုလိုတဲ့ ယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးပါ။
"Do you object.." တို့"Do you dislike…" တို့နဲ့ အကြမ်းဖြင်း အဓိပ္ပါယ် တူတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီလိုမေးတာကိုပြန်ဖြေတဲ့သူက request ကိုလိုက်လျောနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း negative form နဲ့ပြန်ဖြေရတယ် ။ ဥပမာ "No." "Not at all." "No, of course not." စသဖြင့်ပေါ့။ Larry ဖြေတာကိုကြည့်ပါ။ " No, not at all."
ဆိုလိုတာက "No, I don't mind." = "I will be glad to."
Would you mind ..အနောက်မှာ လိုက်တဲ့ verb တွေကို verb-ing နဲ့ပြော/ရေး ရတယ်။ အခြား
Would you mind openingawindow?
So = so that = in order that
Not. No, not at all= No, I wouldn't mind at all (or) No, of course
Handsome woman နှင့် Pretty man
Permalink Reply by J Aung Di on December 17, 2014 at 17:12
Permalink Reply by Thaw Thaw Zin on February 4, 2015 at 7:46
I get many knowledge from your post, so thankalot. Please continue your lessons for all learners
Permalink Reply by AshinDamahar Nanda on June 16, 2015 at 5:18